H.E. U Soe Lynn Han Presents Credentials to President of the European Council – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
H.E. U Soe Lynn Han Presents Credentials to President of the European Council
Ambassador U Soe Lynn Han, Head of the Mission of the Republic of the Union of Myanmar to the European Union (European Commission/ European Council), presented his Credentials to the President of the European Council, His Excellency Mr. Donald Tusk, on 23 January 2019, in Brussels.
Dated. 14 February 2019
ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မစ်ရှင်အဖွဲ့ အကြီးအကဲ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်သည် ၎င်း၏ ဥရောပသမဂ္ဂ (ဥရောပကော်မရှင်/ ဥရောပကောင်စီ) ဆိုင်ရာ ခန့်အပ်လွှာများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ဒေါ့နယ်လ် တာ့ခ်(စ်)ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်